Global Voices teny Malagasy » Bolivia: Atrikasa Web 2.0 Ho An’ny Mpampianatra Aymara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Mey 2012 8:50 GMT 1	 · Mpanoratra Victoria Tinta Nandika (en) i Eduardo Avila, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Andiana atrikasa Web 2.0 no notontosaina tao amin’ny departemantan’i Oruro ao Bolivia tamin’ny 2 Mey sy 3 Mey 2012. Nokarakarain’ny Minisitireran'ny Fampianarana  sy ny tetikasa Jaqi Aru  izany atrikasa izany. Tetikasa izay ahitana vondrona mpandalina teny ao an-tanànan’i El Alto, Bolivia. Nampiroborobo ny fampiasana ny teny Aymara tamin’ny aterineto ity vondrona ity. Maro tamin’ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny Global Voices Aymara  ihany koa no ao anatin’ny Jaqi Aru. Mpampianatra momba ny fampianarana avy ao amin’ny Sekoly Ambony Mpampiofana Mpampianatra (ESFM ny fanafohezan-teny amin’ny espaniola) no nandray anjara tamin’ny atrikasa. Ny hanampy ireo mpampianatra sy ny mpianany hahay hamorona votoaty amin’ny teny Aymara ao amin’ny aterineto no tanjon’ny atrikasa.
Araka ny fandaharan’asa napetraka, toy izao manaraka izao ny fotoana nandritra ny atrikasa:
Tamin’ny Alakamisy 3 Mey, nanomboka tamin’ny 9:30 ny atrikasa tao amin’ny efitrano fanaovana konferansa, izay nosokafan’ny Jaqi Aru tamin’ny fampahafantarana fohifohy.
Taorian’izany fampahafantarana izany, nilazalaza momba ny Web 2.0 sy ny Wikipedia i Mario Duran Chuquimia . Nandritra ny atoandro, nisy ny atrikasa fampiharana natao tao amin’ny efitrano misy ny solosaina, ka nampiasa solosaina iray avy misy aterineto ireo mpampianatra tamin’izany;
Nikarakara atrikasa momba ny tranokala tambazotra sosialy kosa i Martin Canaviri, izay nifantoka tanteraka tamin’ny fampiasana ny Facebook, Ruben Hilare  kosa nizara ny traikefany amin’ny fampiasana Twitter. Farany, Victor Paco Montevilla  nampahafantatra momba ny fampiasana sary sy ny famoahana izany amin’ny tranonkala Flickr.
Sary avy amin'i Mario R. Duran, nampiasaina tamin'ny Creative Commons license
Nanazava momba ny famahanam-bolongana amin’ny WordPress kosa i Elias Quispe  tamin’ny Zoma 4 Mey, Nampahafantatra ny Skype tamin’ireo mpandray anjara kosa i Edwin Quispe . Navoakan’I Hilare tao amin’ny Wikipedia Aymara  avy eo ny fandehan’ny atrikasa.
Nofaranana tao amin’ny efitrano fivoriana ny atrikasa izay nanaovana tombatombana fohy, ka nisaotra ireo mpikambana ao amin’ny Jaqi Aru sy ny Minisiteran'ny ny Fampianarana ireo mpampianatra tamin’ny fikarakarana ny atrikasa sy tamin’ny fiofanana nomena. Maro ireo mpandray anjara no nilaza fa vonona tanteraka izy ireo hamorona votoaty amin’ny alalan’ny fampiasana teknolojia.
Nilaza toy izao ilay mpampianatra René Chura Quispe avy ao amin’ny sekoly ESFM Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, ao amin’ny departemantan’i La Paz:
…Tokony hahay sy hahafehy ny teknolojia isika, zava-dehibe ny fahaizana mampiasa ireo fitaovana amin’izany…
Antonio José de Sucre, mpampianatra ao amin’ny ESFM Antonio José de Sucre, nanamarika hoe:
Ny asa arahina fahavononana toy izany eo anatrehan’ny mpianatsika no hanampy antsika amin’ny fampiasana ity sehatra fifampitam-baovaon'’olo-tsotra ity; tsy amin’ny teny Aymara ihany, fa amin’ny teny espaniola ihany koa.
Cristina avy ao amin’ny ESFM Caracollo ao amin’ny Faritanin’i Oruro nilaza hoe:
…Antenaina fa mbola hisy ny atrikasa amin’ny manaraka, tsara raha mbola mikasika bebe kokoa ny fampiasana ny fitaovana nomerika izany; andeha hapariaka ny tenintsika Aymara tahaka ny teny Anglisy mipariaka ao amin’ny Aterineto.
Nanambara ireo mpampianatra fa misy ny andraikitra tokony horaisina arak’izany ary tokony hanapariaka votoatim-baovao amin’izany sehatra virtoaly izany isika, izay nianarana nandritra ny atrikasa.
Jaqi Aru namoaka lahatsoratra bilaogy [amin’ny teny aymara]  mikasika ny atrikasa, namoaka ity lahatsary manaraka nandritra ny atrikasa ity ihany koa izy ireo tao anatin’ny bilaogy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/25/33414/
 Minisitireran'ny Fampianarana: http://www.minedu.gob.bo/
 Jaqi Aru: http://www.facebook.com/jaqiaru
 Global Voices Aymara : https://aym.globalvoicesonline.org/
 Mario Duran Chuquimia: http://bolivianueva.blogspot.com/
 Ruben Hilare: https://ay.globalvoicesonline.org/author/ruben-hilari
 Victor Paco Montevilla : https://ay.globalvoicesonline.org/author/victorpaco
 Elias Quispe: https://ay.globalvoicesonline.org/author/eliasquispe
 Edwin Quispe: https://ay.globalvoicesonline.org/author/edwin-quispe
 Wikipedia Aymara: http://ay.wikipedia.org/wiki/Nayriri_u%C3%B1stawi
 lahatsoratra bilaogy [amin’ny teny aymara]: http://jaqi-aru.org/blog/?p=843